Linux အတွက် ခြစ်ရာ။ Scratux နှင့် အခြားရွေးချယ်စရာများ - Ikkaro
ခရစ္စမတ်အထူး- LEGO မြှင့်တင်ခြင်းလမ်းညွှန်
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> Software များ >> Linux ကို >> Linux အတွက် ခြစ်ရာ (Scratux Ubuntu)
Linux အတွက် ခြစ်ရာ (Scratux Ubuntu)
အားဖြင့် Nacho morato
စပြီးတီးတယ်။ ကုတ်ခြစ်ရာ သူတို့ တည်ရှိနေတာကို ကျွန်တော် စက်ဆုပ်စွာ မြင်ပါတယ်။ Windows၊ MacOS၊ ChromeOS နှင့် Android အက်ပ်များအတွက် ဒက်စ်တော့အက်ပ်များ သို့သော် Linux အတွက်တရားဝင်အပလီကေးရှင်းမရှိပါ။
Linux အတွက် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိ၍ ၎င်းတို့က ၎င်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ မင်းရဲ့ မက်ဆေ့ချ်က အခုပဲလေ။
လောလောဆယ်တွင်၊ Scratch App သည် Linux နှင့် တွဲဖက်၍မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Scratch ကို အနာဂတ်တွင် Linux တွင် လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းရှာရန် ပံ့ပိုးကူညီသူများနှင့် open-source အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အသိပေးပါ။
အွန်လိုင်းဗားရှင်းကို ဘရောက်ဆာကနေ အသုံးပြုနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ ဆက်သုံးနိုင်တဲ့ အားသာချက်တွေရှိတာကြောင့် Desktop Application တွေကို နှစ်သက်ပြီး အလုပ်အပေါ် အာရုံစိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အခြား tabs ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ Browser ကို ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ .
ဒါပေမယ့် အမြဲလိုလို အခြားရွေးချယ်စရာတွေ ရှိပါတယ်။ တွစ်တာမှာ အကြံပြုချက်ပေါင်းများစွာကို စမ်းကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ Scratux ပါ.
Linux အတွက် ဤ desktop application သည် Scratch ၏ အွန်လိုင်းဗားရှင်းနှင့် အတိအကျတူညီပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Scracth ကဲ့သို့ အလားတူ extension များပင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရောဂျက်များကို လော့ဂ်အင်ဝင်ပြီး ထပ်တူပြု၍မရသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ Windows၊ macOS နှင့် ChromeOS တွင်တရားဝင်အပလီကေးရှင်းများဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မလား။သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်များကို သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ၎င်းတို့ကို Scratch ဖော်မတ်ဖြစ်သည့် .sb3 တွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး ထိုပရောဂျက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Scratch အွန်လိုင်းသို့ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
တစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသိုက်အဝန်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိုပါက ခက်ခဲသည်။ ပရောဂျက်များကို အွန်လိုင်းမှ desktop သို့ပြောင်းခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပရမ်းပတာဖြစ်သော်လည်း သင်သည် အပလီကေးရှင်းပေါ်တွင် အမြဲအလုပ်လုပ်နေပါက ၎င်းသည် သင့်အတွက် ပြဿနာမဟုတ်ပေ။
ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေက အတူတူပဲလို့ မြင်တယ်။
၎င်း၏ github မှတဆင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ https://github.com/scratux/scratux Ubuntu၊ Manjaro နှင့် Fedora တွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရပါသည်။
သို့မဟုတ် ၎င်းကို ထည့်သွင်းပါ။ snap
လောလောဆယ်တွင် အခြားသော အလားအလာရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာများကို ကျွန်ုပ် ရှာမတွေ့ပါ။
Linux တွင် Scratch ကိုအသုံးပြုရန် မတူညီသောဆော့ဖ်ဝဲလ်များရှိသော်လည်း ၎င်းသည် Arduino တွင် ပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် Scratux ကဲ့သို့ Scratx ကဲ့သို့မဟုတ်ပေ။
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကို သိရင် comment မှာ ချန်ထားခဲ့ကာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါ့မယ်။
Scratch ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ဘာအတွက်လဲ
.py ဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။
Android အတွက် APK အက်ပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းနည်း
Anaconda သင်ခန်းစာ - အဲဒါဘာလဲ၊ ဘယ်လိုတပ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
သင်၏ LEGO Boost အတွက် အကြံဥာဏ်များ
Linux တွင် IP ကိုမည်သို့မြင်ရမည်နည်း။
categories Linux ကို, Software များ လက်မှတ်အညွှန်း
1 Scratux ပါ
2 Scratux ထည့်သွင်းနည်း